Izibani Zasemgwaqweni, I-Led Shoebox Light, Inkundla Yokukhanya - UNIKE
I-UNIKE Technology Limited iyinkampani ephethwe iHongkong enamagatsha ayo aseShenzhen atholakala esifundeni saseBan'an, eShenzhen kusukela ngo-2016 nefektri yayo (iBelux) etholakala edolobheni laseZhongshan kusukela ngo-2012. okufana ne-LED High Bay light, i-LED Canopy Light, i-LED High Mast Stadium Light, i-LED Street Light, i-LED Tunnel light, i-LED Flood Light, i-LED Batten Light, neminye imikhiqizo ye-LED ehlobene. Singahlinzeka futhi ngezixazululo zezindlu ezikhanyayo nezesekeli njengesicelo ngasinye…
Ukukhanyisa endaweni yokusebenzela, indawo yokugcina izimpahla, isitshalo, inkundla yasendlini, isiteshi, ihholo lombukiso, imakethe, isiteshi sokukhokhela, isikhungo sokungena, igalaji likaphethiloli, njll.
AmaLuminaires asetshenziswa emakethe, endaweni yokupaka izimoto, enkundleni yezemidlalo engaphandle, ebhodini lezikhangiso, emhubheni, epaki, ebaziwe, esakhiweni esiphakeme, ebaleni lokudlala ibhola / basketball, inkundla yethenisi, njll.
Isetshenziswa kakhulu emgwaqeni omkhulu, imigwaqo emikhulu, isibhakabhaka, umgwaqo wasemadolobheni, umgwaqo, neplaza, isikole, indawo yokuhlala, ipaki nezinye izindawo ezidinga ukukhanya kwangaphandle.